Talata 24 Novambra 2020 – FJKM
Ireo dingan’ny fanasitranana
Tantaran’ny zanakavavin’ilay vehivavy jentilisa sitrana ity . Avy amin’izao no hahazoantsika ireo dingana ho amin’ny fanasitranana . Ireto avy izany :
1-Mandre ny amin’i Jesoa (and 25a)
Ambaran’i Marka fa na dia naniry azai Jesoa ny tsy ho fantatr’olona hoe tonga tao amin’ny trano , dia tsy voasakana ho tsy fantatr’olona izany . Eto dia fantatr’ilay vehivavy jentilisa fa tao i Jesoa . Jentilisa , kanefa maharaka tsara ny vaovao momba an’i Jesoa . Zava-dehibe ity dingana ity voalohany ity.
2-Manatona an’i Jesoa (and25a)
Tsy nionona fotsiny tamin’ny fandrenesana ity vehivavy ity fa nanatona an’i Jesoa mihitsy izy . Dingana tena ho enti-mandresy ny olana samihafa ny fanatonana an’i Jesoa . Izy no herin’Andriamanitra tonga amin’izao tontolo izao . Betsaka no mahalala an’i Jesoa fa tsy manatona Azy .
3-Miady varotra amin’i Jesoa (and 28)
Tonga ho an’ny Jiosy aloha i Jesoa raha ny marina . Tsy nanaiky izany anefa ity vehivavy ity fa niady varotra .Rehefa tena niady varotra izy dia nanaiky Jesoa . Aza mora kiviana rehefa tena mitady famonjena . Ho an’ny olona rehetra tokoa ny famonjena. Izay manao ezaka toa an’ity vehivavy ity no hahomby hatrany .
4-Mino izay lazain’i Jesoa (and30)
Rehefa nanaiky Jesoa dia nilaza fa itrana ilay zananynarary . Nino izany ravehivavy ka niala teo amin’i Jesoa . Nino izy fa marina izay nolazain’i Jesoa . Nino izy fa hain’i Jesoa tokoa izany .Avy hatrany dia lasa izy nody , ary nahita maso ny fahamarinan’ny tenin’i Jesoa . Fototra tsy azo ialana ny finoana raha te-ho sitrana .
Inona no antony mahasarotra ny fanatonana an’i Jesoa ?